Kitra – «Amboaran’ny Caf 2016» : mpilalao 20 ny mandrafitra ny Harare City FC | NewsMada
Tonga, omaly eto Madagasikara, ny ekipan’ny Harare City FC, avy any Zimbaboe, hifandona amin’ny AS Adema, eo amin’ny lalao miverina amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Caf. Misy olona 43 mandrafitra ny delegasiona ka ny 20 amin’ireo, mpilalao avokoa. Nolazain’izy ireo, teny am-pahatongavana teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, fa vonona izy ireo ary haka fandresena ny handehanany eto Madagasikara fa tsy hitsangantsangana akory. Ny hiaro ny tombon’isa 3 noho 2, efa azony tany amin’ny lalao mandroso, ny tena tanjony. Omaly ihany, efa nihazo an’i Mahajanga ny Harare City FC, toerana hanatontosana ny fihaonana, ny alahady ho avy izao.
Anio zoma kosa vao ho tonga i Soilihi Msahazi, «commissaire de match». Ny asabotsy indray ny fahatongavan’ireo mpitsara maorisianina efatra miralahy : i Dharamveer Hurbungs sy Vivian Vally ary Jean Daniel Telvar miaraka amin’i Ahmad Imtehaz Heeralall.
Raha ho an’ny Gor Mahia Kenya, mpifanandrina amin’ny Cnaps Sport, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara indray, amin’ity alakamisy ity ny fahatongavan-dry zareo. Hijanona eto an-dRenivohitra ny delegasiona ary rahampitso zoma vao hihazo an’i Mahajanga. Araka ny fantatra, hisy mpikambana 29 ao anatin’ny delegasiona kenyanina. Efa tonga omaly kosa ireo mpitsara seiseloà hitantana ny lalao : i Nelson Ricky Emile, Gilbert Lista, Steve Marie, Bernard Camille.
Ny asabotsy tolakandro, araka ny fandaharam-potoana, ny hanaovana ny lalaon’ny roa tonta, any amin’ny kianja Rabemananjara hatrany. Tsiahivina fa efa nandresy tamin’ny isa 2 noho 1 ny Cnaps Sport, nandritra ny lalao mandroso, notanterahina tany Kenya.